Handle emnyango, Glass Door Handle, Ngaphakathi Door Handle - YALIS
Ngaphakathi Izibambo Zocango
Izibambo zeMinyango encinci
Izibambo Zocango Lwanamhlanje
Iziphatho zoMnyango oXabiso ngexabiso eliphantsi
Slim Isakhelo seglasi Izibambo
Izibambo Zocango Olungabi Nabantwana
Izixhobo zeMnyango zeHardware
Ngubani uYALIS uyilo
Uyilo lwe-YALIS lukhokela umenzi okhethekileyo kwizixhobo zeminyango. Uyilo lwe-YALIS, luphawu lwenkqonkqo ye-zinc alloy lever handles kunye nesisombululo somnyango esinezixhobo ezingaphezulu kweminyaka eli-10 yamava.
Zithini iimveliso zethu eziphambili
Uyilo lweemveliso eziphambili ze-YALIS izibambo ziphakathi kwaye ziphezulu kwimarike kunye noyilo olwahlukileyo kunye nomgangatho ozinzileyo, kwaye ikwabonelela abathengi ngesisombululo seengcango zeminyango.
Imveliso ye-YALIS ekrelekrele
Uyilo lwe-YALIS unefektri yayo. Ukuphucula imveliso ngokukuko, i-YALIS yazisa izixhobo zemveliso ezizenzekelayo kunye nenkqubo yolawulo lwe-ISO ngo-2020.
MALUNGA nomzi mveliso
Isakhelo seSlim Isisombululo seHardware
Ngokuthandwa kwesitayile esincinci, iingcango zeglasi zesakhelo esincinci ziye zathandwa ngabathengi. Nangona kunjalo, uninzi lweglasi yokutshixa imarike ayizifanelanga iingcango zeglasi zesakhelo esincinci. Ukusombulula le ngxaki, i-YALIS isungule isakhelo esincinci sesitshixo sokuphatha iminyango kunye nesakhelo esincinci sesisombululo seglasi yeglasi.
Isisombululo seMinimalist Door Hardware
Njengomboneleli wesisombululo se-high-door door, i-YALIS ivelise iminyango yokubamba iminyango encinci kwiminyango encinci (iingcango ezingabonakaliyo kunye neminyango yokuphakama kwesilingi). Ngesitshixo sokuphatha ucango oluncinci njengesiseko, i-YALIS idibanisa isisombululo esincinci somnyango.
Ngaphakathi Isisombululo seKhompyutha seHoldware
I-YALIS ivelise izitshixo zokuphatha ucango lwangaphakathi kunye nokutshixa iminyango yokubamba izinto ngokokuhambelana nobuhle babantu abancinci kunye neemfuno zabavelisi beminyango, ibonelela ngesisombululo sangaphakathi somthi wehardware kubathengi.
Isisombululo seKhompyutha seHardware
Iingcango ze-ecological, ezazi njengezakhelo zealuminium iingcango zomthi, ngokubanzi zinokuphakama phakathi kwe-2.1m kunye ne-2.4m, kwaye iminyango yabo yeminyango inokudityaniswa ngokukhululekileyo kwaye itshintshisane nesakhelo somnyango. I-YALIS ivelise isisombululo seminyango yendalo esekwe kwezi mpawu.
Isisombululo seHardware yoMnyango waBantwana
U-YALIS ubeka ingqalelo kukhuseleko lwabantwana kwigumbi, njengokutshixela ngengozi, ukuwa ngaphakathi, iingozi ngesiquphe njalo njalo. Ke ngoko, i-YALIS ivelise isitshixo sokungabinamntwana emnyango wegumbi labantwana, elinokuthi livumele abazali ukuba bavule ucango ngokukhawuleza xa umntwana esengozini.
URobin · R
Untywiliselwe kwimizi-mveliso yehardware yeminyango ngaphezulu kweminyaka engama-20 kwaye unezakhono kumacandelo ezixhobo zeminyango eyahlukeneyo. Ngaphezulu kweminyaka engama-20, uqokelele amava atyebileyo kuphuhliso lolwakhiwo kunye nolwazi olunzulu lwezixhobo zomnyango, kunye nokuphuhlisa iimveliso ngokweemfuno zabathengi.
Njengenjineli yenkqubo yeYALIS, ulawula ngokungqongqo yonke inkqubo yomsebenzi wakhe wemihla ngemihla ukuqinisekisa inqanaba lezobugcisa kunye nomgangatho weemveliso. Ukongeza ekuqinisekiseni inqanaba lezobugcisa kunye nomgangatho weemveliso, uqhubeka ngokuqhubekayo ekhulisa ubugcisa obutsha ngokweemfuno zentengiso kunye nabathengi.
Inamba · L
Ufumana ukhuthazo kubomi bemihla ngemihla, adibanise iindlela zangoku zefashoni, kwaye asebenzise umahluko wezinto kunye nokugqitywa komphezulu ukwenza iimveliso zixineke ngakumbi kodwa zintle ngakumbi, kwaye zisondele ngakumbi kubuncinci.
Igama loqhagamshelwano Hanson · L
Ubeka umdla wakhe kuyilo ngalunye lwemveliso, alandele ubugcisa banaphakade kunye nobuncinci, kwaye axhase ubomi bokuyila nobulula. Ingqondo eyahlukileyo yomgca luphawu lwakhe oluphawulekileyo, kwaye unomdla wokuguqula iikhonsepthi zoyilo zokuqala zibe ziimveliso ezizodwa zobugcisa.
Ukujonga phambili kwikamva, uYALIS uya ...
Intshayelelo: Isiphithiphithi esibangelwe yi-COVID-19 senze ukuba iinkampani zingabe zisaya ekukhanyeni ekupheleni kwetonela, kodwa zibambeke kwinkungu ukufumana indlela yokuphuma. —— yi-European Union Chamber of Commerce e-China Ekuqaleni kuka-2020, kwaqhambuka i-COVID-19. Okwangoku, i-ep ...
I-CIDE 2021 Ngaba ibilapha njengoko kucwangcisiwe, i-YALIS Wa ...
I-Ara yoKwenziwa kweNdlu yonke eQhelekileyo iyeza Ngophuculo olupheleleyo lwamanqanaba okusetyenziswa kunye nokuhlaziywa okuqhubekayo kweekhonsepthi zokusetyenziswa, ukwenziwa kwendlu yonke kube yinto engenakuphikwa yokusetyenziswa kwekhaya. I-China lilizwe elinemali enkulu ...
Ukuzalwa Kwesiphatho Semnyango
Ngalo lonke ixesha ucofa isiphatho somnyango ukuvula ucango, ukhe wacinga ukuba ngawaphi amanqanaba ekufuneka uphume kuwo lo mnyango ukusuka ekuqaleni ngaphambi kokuba uvele phambi kwakho? Emva kwesiphatho somnyango esiqhelekileyo yimizamo yokunyanzelisa abayili kunye nobuchule bobugcisa be ...
UKUFUNDA SIMAHLA +86 135 6061 4928
IDILESI Rd Songbai No.77, Hefeng Industrial Area, Xiaolan Idolophu, Zhongshan City, kwiPhondo Guangdong, PRChina 528415